Amava am xa usebenzisa uGoogle Earth weCadastre -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Amava am esebenzisa iGoogle Earth yeCadastre
AutoCAD-AutoDeskcadastreGoogle umhlaba / imephu
Ndidla ngokubona imibuzo efanayo kumagama aphambili abasebenzisi abakho kwii-Geofumadas kwi-injini ye-Google yokusesha.
Ngaba ndingabhalisa usebenzisa iGoogle Earth?
Ichanekile kangakanani imifanekiso kwiGoogle Earth?
Kutheni ukuba uphando lwam luhambe ngokubhekiselele kwiGoogle Earth?
Phambi mabohlwaye kum oko uza kufunda kweli nqaku, makhe uzibeke kwimeko amava kwafuneka ukuba athathe uvavanyo cadastral kwiprojekthi apho sinambi- ezixabisekileyo nolutshintsho kwiziphumo iindlela attachment kunye neeprothokholi emasikweni.
Xa ndibeka umda kwizinto eziguquguqukayo zento eyenziweyo ukwenza i-orthophoto koomasipala abangama-25 abafuna uvavanyo, ndaqonda ukuba kukho izinto ezingadibananga:
-Ixesha lokwenza iindiza sele lidlulile, kuba ilizwe litshisa kwaye kukho ixesha eliphambili phambi kokuba i-cloudiness, umsi kunye nezimo zezulu,
-Yayiminyaka apho umfanekiso wesathelayithi uthengiweyo ngeenkqutyana kwakungeyona inketho ngeengcaciso ezikhoyo ngoku,
-Iziko likarhulumente elinike imvume yokubhabha beliphelelwe lixesha, lalifuna usozigidi wemali (etafileni, ewe), ngenxa yokuchithakala kukamasipala ngamnye. Ngaphandle kwento yokuba inqwelomoya indibhatalele eyongezelelweyo ngokukhulisa inkwenkwe etyebileyo elathi eli iziko kuphela elinokwazi ukujonga ezo moya.
-Imali eyayifumaneka yayingasifinyelelekanga ukwenza i-orthophoto enhle, kodwa ivuko elincinci.
kelwe lowo isilivere, ngokwenza amaxesha orthophoto kuwandisa nqanda ukufumana iziphumo phambi kokuba imihla yokuvunywa lwamaxabiso cadastral ukuba utshintsho kwiminyaka emihlanu.
Xa ndijonga iziphumo ezifunwa yile projekthi, ndiye ndabona ukuba indlela ephazamisayo esebenzisa imodeli edibeneyo ye-cadastre ibaluleke ngaphezu kokuchaneka. Kwakubaluleke ngakumbi ukubonisa imodeli yeenjongo ezininzi kunomgangatho ophezulu wendlela elula yezomthetho. Ke ndikhethe ukungenisa kugculelo kunye nokukhawulezisa iziphumo zexesha elifutshane.
Inqaku lisekelwe kuloo mava, ngakumbi njengendlela yesicelo sobugcisa kunye nengqiqo eqhelekileyo kuneresiphi yomlingo; nangona ndisebenzise imizekelo ephuma kumasipala, apho kufuneka ndivume ukuba “isobho se-choros” ibuyisela iinkumbulo ezidlulela ngaphaya komxholo wejografi.
Imifanekiso ye-Google Earth ichanekile kakuhle (isihlobo).
Makhe sijonge isampulu yomfanekiso. Kwinqanaba lokugubungela okuqhubekayo, kunokubonwa ukuba uphando esilwenzileyo nesitishi esipheleleyo kunye ne-georeferenced ye-geodetic gps, ihambelana kakuhle nomfanekiso owawukho ngaphambi ko-2013. Ewe kunjalo, oku bekuyimfuneko ukukhuphela umfanekiso ukuze uwenze uzinge ngamanqaku ulawulo esilukhulisileyo. Kule meko, ukufuduswa (komfanekiso, hayi kuvavanyo) kuye kwafuneka kwenziwe malunga neemitha ezili-11 ukuya emantla ntshona.
Imifanekiso kaGoogle yoMhlaba kufuneka itshintshwe xa kuthelekiswa nophando lwethu oluchanekileyo. Nje ukuba kwenziwe oku, umfanekiso ubonakalisa ukungqinelana.
Imifanekiso ye-Google Earth ayinakho ukuhambelana ngokuchanekileyo ngokupheleleyo.
Ukuqhubeka nomzekelo ofanayo, sibona ukuba umfanekiso weGoogle Earth uhlaziywe kwi-2013 ine-displacement ehlukile kuneyokuqala. Ukuqhekeka phakathi kweemifanekiso kunomsebenzi owenziwe kakuhle kangangokuba umncinci ubonakala ukuyeka; kwimeko yendlela, ukuba njengoko kunjalo nangokukrola kwicala akukho zile ngokungathi umnqamlezo, kodwa ilungelo kwimvukelo kunokubonwa umlambo ayisekho ingqamana okukunyusa; Nangona ingaba yatshintshe inkambo, ngubani owaziyo ukuba uyazi ukuba kukho udonga olugcinayo ukusuka kwibhulorho engatshintshi kwiminyaka.
Ke ukusebenzisa lo mfanekiso kutsha nje kuthetha umsebenzi ofanayo nalowo ungaphambili; misela amanqaku anokuchongwa kwaye udibanise nawo kunye neendawo zokulawula ebaleni, emva koko ususe umfanekiso ngevektha, esicacileyo ukuba yahlukile kuleyo yomnye umfanekiso. Ukuziqhelanisa kukhokelele kwizisombululo ezinomdla, apho umfanekiso weGoogle Earth wawusisalathiso ebusweni beempazamo ezenziwe kwisikhululo esipheleleyo, njengokulahla umbono ngasemva, ukufumanisa ukuba iqela lifuna ukulinganiswa, ukuqinisekiswa kweecadastral quadrants ezithobela ulwahlulo olusekwe kwiidigri ngqo, imizuzu kunye nemizuzwana, kwaye ungathethi ntoni njengobungqina bemephu enamacala amathathu ebonisa umahluko kwixabiso le-cadastral elihlawulwe ngomhlaba nezakhiwo. Ezi zinto, ngaphandle komfanekiso wesalathiso okanye ukusetyenziswa okulula kwenkqubo ye-CAD / GIS phantse akunakwenzeka.
Isiseko seemifanekiso zeGoogle Earth sisetyenzana seentlobo zezibhengezo zeminyaka eyahlukileyo, kunye nemithombo eyahlukeneyo kunye nokungangqinelani kokuma phakathi kwezi ziqwenga.
Ukuchaneka kwesimo seGoogle Earth kuchanekile.
Ukushiya ecaleni ingxaki yemifanekiso, iimpawu ze-spheroid ezisetyenziswa nguGoogle Earth zichanekile ngokubhekisele kulo naluphi na uphando olwenziweyo. Kumfanekiso ongentla, xa ubonakalisa ulungelelwaniso lwe-UTM kuGoogle Earth, kwifayile yovavanyo endilufakileyo njenge-kml, ukuchaneka kolungelelwaniso akukho ngxoxo malunga neDatum WGS84, kuba leyo yidatha yemathematics.
Embindini weProjekthi, i-gurus yeziko likarhulumente yadlula ngezixhobo ezichanekileyo. Sibaxelele ukuba bangasebenzisa olu phando njengenkxaso, kuba babesebenzisa iipropathi ze-georeferencing zeprojekthi yokubiza izihloko kwimfuno. Kwakunzima ukukhupha iqhuma emqaleni wam xa baphoxisa enye yamakhwenkwe e-cadastre, bemxelela ukuba ukuphakamisa kwakhe akunamsebenzi.
Ubuncedo beGoogle Earth ye-cadastre yinzuzo yakho njengenkxaso
Inyani yile yokuba ukwenza izigqibo zangaphambili zivunyelwe ukunika iGoogle Earth ukusetyenziswa kunye nokufaneleka kwayo. Njengazo zonke izixhobo ezisetyenziswa kwiprojekthi, uGoogle Earth yenye yazo.
I-Google Earth ayikwazi ukuxhomekeka ekusebenziseni imifanekiso engabikho, kungekhona nje kuphela kunyaka okhoyo kodwa kwakhona eminye imihla yomlando. Ndikhumbula intlanganiso apho usodolophu wathatha inxaxheba enikezela ngeziphumo: “IGoogle Earth ibikuisisombululo esifikelelekayo sokuba nemifanekiso yomasipala wonke, ongazange sinikeze nayiphi na inkampani okanye iziko likarhulumente“. Xa ebuzwa ngu-XNUMXs Cadastre guru ukuba ukuchaneka kwakungalunganga, amazwi akhe abhalwe kwiividiyo zam: "Laba bafana bazisombulula, ukuba unesiphakamiso esingcono, bhala phantsi kwaye siza kukuqwalasela".
Into esingafanele siyilibale kukuba abo baphetheyo bafuna izixhobo ezilula ukubonisa iziphumo kwinqanaba eliphakathi. Kukho abantu abangasokuze baye ebaleni, kwaye bafuna imiboniso ebonisa ukuba iGoogle Earth yayingenakubekwa ndawo ngelo xesha. Ukuvula i-kml okanye inkonzo ye-WMS kwaye ubabonise ukuba iipropathi zasedolophini nasemaphandleni zikamasipala zikhona, kunye nemodeli yendawo yedijithali kunye nezakhiwo ezinokuphakama kwazo kuxhomekeke ngaphambili nasemva kokungena kweprojekthi ... ngamava axabisekileyo. Abazi ngokuchaneka, abazi ukuba siyiguqula njani le ndlela, kodwa bayavuya ukubona iziphumo zomzobo kunye nokuvuma ukwaphula imiqobo yezolawulo okanye iimfuno ezingamampunge zokunika ingxelo ngamaphepha amaninzi.
Ukukhuphela imifanekiso kwiGoogle Earth yayiyinto yokudibanisa. Ixabiso leprojekthi lalilawulwa ngokudibeneyo; Kwakungekho mfuneko yokuthenga isitishi esipheleleyo okanye i-millimeter GPS kumasipala ngamnye. Inye kuluntu ngalunye ibanele, kwaye bayaqhubeka nokwenza oko kuba batshintsha kuphela enyakeni ukulandela uphando okanye uhlaziyo ngezixhobo abazenzileyo ngonyaka njengotyalo-mali lwengeniso kunye nophando lobume bomhlaba kwindlela enkulu okanye iiprojekthi zenkqubo. hydrosanitary.
Ukuxhathisa ukhetho lokusebenzisa uMhlaba kaGoogle njengesalathiso kukulwa nje udonga. Abo bathe baya kunika iinkonzo zekadastral koomasipala kule meko bazakundixelela ukuba ngoku oomasipala abafuni kuhlawulela umsebenzi ochanekileyo, kodwa ngenkonzo yokuqeqesha amandla endawo, ukusetyenziswa kwezixhobo zexabiso eliphantsi neengcebiso ukuze izigqibo zichanekile.
Emva kwayo yonke loo minyaka, kufuneka ndivume ukuba kukho iimpazamo endizenzileyo, kwaye endizakubhala kuzo inqaku elikhulu kuneli. Ndingathanda isoftware yasimahla ukuba ikhule ngakumbi, ngaloo ndlela sisindise enye imfumba yemali; okanye ukuba imephu yesinzi ne cadastre i lungele injongo ukusasazeka okungakumbi, njengoko bekuya kundibiza imali encinci ukuchaza iindlela esizenzileyo ukusukela ngoko. Kodwa kwiziphumo namhlanje ndibhekisa kuzo:
Imodeli ye-cadastre esekelwe kulawulo oluhlangeneyo loomasipala likhona, yamkelwa ngamanye amashishini, kungekhona ngenxa yezinto ezintsha kodwa ngenxa yezifundo ezifundiweyo.
Endaweni yokwenza i-cadastre koomasipala abangama-25, amava akhokelele kuyo ngo-89. Ukuthatha nje inzuzo kuqoqosho lwesikali solawulo ngokudibeneyo, kwaye kunjalo, sebenzisa imifanekiso kaGoogle Earth njengenkxaso.
Innovation human resources zasekuhlaleni osi yezoqoqosho ukusuka apho abanye kufuna kwakhokelela ukubonisa ukuba zonke dollar imali ngumasipala, ifunyanwe kwiminyaka ngaphantsi kwe emibini wabandisa izihlandlo ezintandathu kwingeniso kwithuba leminyaka 10.
Oomasipala abafumene ukufikelela ngokugcwele kwimimandla yabo, okwangoku bahlaziya ngokusebenzisa imithombo engenayo abayifumana kuyo yonke indawo, kwaye bayashintsha imethadatha yokuchaneka kunye nekhwalithi kunye nejometri.
Phantse ekupheleni kweprojekthi, ndaphinda ndadibana ne-gurus yeziko likarhulumente, ababengqinisisa iingxaki ezithile ababenazo, ababesele bekhuphe izihloko kwaye bangena kwinkqubo yesizwe. Kuqala, ngethoni yolawulo, basixelele ukuba kufuneka sigqithise iimephu eziphakanyisiweyo. Xa sibanika idilesi yokukhuphela nge-WFS basishiya sijongeka njengabaphambukeli, emva koko omnye wabafana obathobileyo wababonisa besebenzisa i-gvSIG; Wabaxelela ukuba banokuzikhuphelela apho nangaliphi na ixesha abafuna ngalo. Ukuzikhukhumeza kwakhe kwatshintsha ubuso bakhe, saza satshintsha isigqebelo sokuba nosizi, kula magqabaza akhe alandelayo:
Ndixolise, uDon Golgi, into esiyifunayo ngokwenene kukuba uyasinika imifanekiso oyilandileyo kwiGoogle Earth.
Ezinye iindlela zokukhuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth: Cad-Earth y Plex-Earth. Ndikucebisa zombini.
Jonga uGoogle Earth ulungelelanisa kwi-Excel - kwaye uyiguqulele kwi-UTM
Ngaba kufuneka sibuyisele igama elithi "Geomatics"?
UJosé Agustín Wilches Gómez uthi:
Indlela yokuthakazelisa ye-cadastre yezimali, okanye imephu ye-tenencial. Andiyicingi ukuba isebenza kwiminqweno yamaninzi okanye amaninzi amaninzi.